Maraki – Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)
Category Archives: Maraki
1 Chirevo: Shoko raJehovha kuna Israeri kubudikidza naMaraki. Jako bho ndakamuda, Esau ndakamuvenga 2 Jehovha anoti, “Ndakakudai.” Asi imi munobvunza muchiti, “Makatida seiko?” Jehovha anoti, “Ko, Esau akanga asiri mukoma waJakobho here? 3 Asi Esau ndakamuvenga, uye ndakashandura makomo ake akava matongo ndikapa nhaka yake kumakava murenje.” 4 Edhomu angati, “Kunyange takaparadzwa hedu, tichavakazve matongo.” […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inMarakiLeave a comment on Maraki 1
Vaprista vanoyambirwa 1 “Zvino yambiro iyi ndeyenyu, imi vaprista. 2 Kana imi musingateereri, uye kana musingakudzi zita rangu nomwoyo wenyu,” ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose, “ndichatuma kutukwa pamusoro penyu, uye ndichatuka ropafadzo dzenyu. Hongu, ndakadzituka kare, nokuti hamuna kuzvipira nemwoyo yenyu kuti mundikudze. 3 “Nokuda kwenyu ndichabvisa zvizvarwa zvenyu; ndichadzura zviso zvenyu nendove inobva pazvibayiro […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inMarakiLeave a comment on Maraki 2
1 “Tarirai, ndichatuma nhume yangu, uyo achagadzira nzira pamberi pangu. Ipapo Ishe wamunotsvaka, achasvika pakarepo patemberi yake; mutumwa wesungano, wamunoshuva, achauya,” ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. 2 Asi ndiani angatsunga pazuva rokuuya kwake? Ndiani angamira paanoonekwa? Nokuti achava somoto womunatsi kana sipo yomusuki. 3 Iye achagara somunatsi nomuchenesi wesirivha; achachenesa vaRevhi uye achavanatsa segoridhe nesirivha. […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inMarakiLeave a comment on Maraki 3
Zuva raJehovha 1 “Zvirokwazvo zuva rinouya; richapisa sechoto. Vose vanozvikudza navaiti vezvakaipa vachava mashanga, uye zuva iro rinouya richavapisa,” ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. “Hapana mudzi kana davi zvichasara. 2 Asi kunemi munotya zita rangu, zuva rokururama richabuda rino kuporesa mumapapiro aro. Uye muchabuda muchisvetuka semhuru dzabudiswa muchirugu. 3 Ipapo muchatsikira pasi vakaipa; vachava madota […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inMarakiLeave a comment on Maraki 4